नेसनल मेडिकल कलेजको चरम लापरबाही, पाँच सातामा सात जनाको मृ-त्यु ! – Namaste Dainik
May 23, 2020 NamastedainikLeaveaComment on नेसनल मेडिकल कलेजको चरम लापरबाही, पाँच सातामा सात जनाको मृ-त्यु !
वीरगन्ज,जेठ १०–नारायणी अस्पताललाई कोभिड–१९ विशेष अस्पताल बनाइँदा त्यहाँ सञ्चालित डाइलासिस सेवा बन्द भएपछि नेसनल मेडिकल कलेजमा सारिएका,डाइलाइसिस उपचार लिइरहेका ४० मिर्गौला रोगीमध्ये सात जनाको मृ-त्यु भएको छ। पीडित पक्षले यी मृ-त्युका घटना नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको गम्भीर लापरबाहीका कारण भएको आरोप लगाएका छन्।
नारायणी अस्पतालका सेवाहरू बन्द भएपछि त्यहाँबाट पाउने सम्पूर्ण सेवाहरू नेसनल मेडिकल कलेजबाट लिने भनेर जानकारी गराइएको थियो। मिर्गौलाको समस्या भई नारायणी अस्पतालमा डाइलासिस गराइरहेका ४० जना बिरामीलाई समेत सो अस्पतालबाट वैशाख ३ गते नेसनल मेडिकल कलेजमा स्थानान्तरण गरियो। त्यसको पाँच साताभित्र तीमध्ये सात जनाको मृ-त्यु भएको हो।यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ। मृ-त्यु हुनेहरूमा २४ वर्षीय कृष्णा ठाकुर,२४ वर्षकै रञ्जित मण्डल,३५ वर्षीय अजय कार्की,४५ वर्षीया नसरिन बानो,५० वर्षीया तालबुन नेसा, ६० वर्षीय नन्दलाल महतो र ६० वर्षकै नागेन्द्र झा रहेका छन्। नारायणी अस्पतालबाट सारिएपछि समय तालिकाअनुसार उनीहरू नेसनल मेडिकल कलेजमा डाइलासिस गराउँदै आएका थिए।
नेसनल मेडिकल कलेजले भने आरोपलाई निराधार बताएको छ। नेपाल सरकारले नारायणी अस्पताललाई बि–लेबल कोभिड–१९ विशेष अस्पताल घोषणा गरेपछि वैशाख २ गते अस्पतालले त्यहाँका जेनरल सेवा बन्द भएको सूचना टाँस ग¥यो।‘नेपाल सरकार,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य आपतकालीन तथा बिपद् व्यवस्थापन इकाई, स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको चलानी नम्बर ६३५ मिति २०७६ चैत ३० को पत्रानुसार यस अस्पतालमा कोभिड–१९ पोजिटिभ बिरामीहरूको उपचार व्यवस्थापन सुरु गर्नुपर्ने भएकोले यस अस्पतालबाट सञ्चालित आकस्मिकसहितका अन्य सेवाहरू मिति २०७७ वैशाख २ गतेदेखि बन्द गरिएको सूचित गरिन्छ,’अस्पतालको सूचनामा उल्लेख छ।
‘सूचना जारी भएपछि हामीसँग अरू कुनै विकल्प थिएन,उपचारका लागि मेडिकल कलेजमा जानै प¥यो। त्यसपछि त्यहाँको लापरबाही बिरामीको मृ-त्युको कारण बन्न सुरु भयो। मृ-त्यु हुने सात जनामा मेरो आमाको नाम परेको छैन,यो संयोग मात्रहो,’एक जना बिरामीका छोराले नागरिकलाई भने,‘पालो परेको दिन बिरामीलाई बिहानदेखि डाइलाइसिस गर्नुपर्नेमा साँझ पाँच बजे बोलाइन्छ। र ८ बजेपछि मात्र सुरु गरिन्छ। तीनदेखि चार घण्टा लाग्छ र मध्यरातमा सकिन्छ। यसबीचमा हामीले के फेला पर्यौं भने यहाँ डायलोजर (रगत प्रशोधन उपकरण) बाट १० पटकसम्म डाइलासिस हुने रहेछ। नारायणी अस्पतालमा एउटा डायलोजरबाट दुई पटक मात्र डाइलासिस हुने गरेको थियो। मृ-त्युको मुख्य कारण यही होजस्तो लागेको छ।’